ဓမ္မပူဇာ အစီအစဉ်များ: ၃၈ လမ်း ဗုဒ္ဓ၀ိဟာရ ဓမ္မာရုံတွင် ကျင်းပမည့်တရားပွဲ
၃၈ လမ်း အလယ်ဘလောက် ဗုဒ္ဓ၀ိဟာရ ဓမ္မာရုံတွင် ကျင်းပမည့်တရားပွဲ
၁၃ ရက် ဇန္ဇ၀ါရီလ ၂၀၁၁ ကြာသပတေးနေ့တွင် ( ဆင်ဖြူတောင်ဆရာတော် ) အရှင်ဂုဏိန္ဒ
၁၄ ရက် ဇန္န၀ါရီလ ၂၀၁၁ သောကြာနေ့တွင် ( မဇ္စိုမဆရာတော် )ဒေါက်တာကောဝိဒ
၁၅ ရက် ဇန္န၀ါရီလ ၂၀၁၁ စနေနေ့တွင် ( ဓမ္မဒူတဆရာတော် )ဒေါက်တာပညိဿရ
တရားပွဲတည်နေရာ ။ ။ ၃၈ လမ်း အလယ်လမ်း ( ဗုဒ္ဓ၀ိဟာရ ဓမ္မာရုံ )
တရားပွဲအချိန် ။ ။ ညချမ်း ( ရ ) နာရီတိတိ
Posted by ကျနော်ဝေယျာဝစ္စ သမား at 1/10/2011 09:50:00 AM
၈ . ၂ . ၂၀၁၀ တနလာင်္နေ့က ဆရာတော်ဒေါက်တာအရှင်ဣန္ဒ၀...
၉ . ၂ . ၂၀၁၀ အင်္ဂါနေ့က ဆရာတော်ဒေါက်တာအရှင်ေ...
ဗုဒ္ဓ၀ံသရက္ခိတ အသင်းကြီး၏ ၂၀၁၀ အထူးတရားပွဲမြင်ကွင...
၃၄ လမ်း အထက်ဘလောက်တွင်ကျင်းပမည့်တရားပွဲများ
ဆရာတော်ဒေါက်တာအရှင်ဆေကိန္ဒ ၏ လိုတိုးပိုလျှော့
at 1/10/2011 09:50:00 AM